MA GUURSANAYO: Gareth Bale oo KANSALAY Arooskiisa…..(Maxay dhacay??) – Gool FM
MA GUURSANAYO: Gareth Bale oo KANSALAY Arooskiisa…..(Maxay dhacay??)
Byare July 22, 2018
(Europe) 22 Luulyo 2018. Xiddiga Real Madrid Gareth Bale ayaa Kansalay oo Baajiyay Arooskiisa kaddib dhibaato ka taagan qoyska gabadha uu guursan rabo ee Emma Rhys-Jones.
Xagaagan ayaa lagu waday in wiilka reer Wales uu la aqal galo gabadha ay yaraantii soo wada socdeen ee iminka saddexda caruur ah u heysa balse waa la baajiyay oo waxaa dib loogu dhigay xagaaga dambe.
Ilo wareed la helay ayaa sheegaya in Emma, 26-jir ah ay rajeynayso in waqtigaas uga faa’iideysato inay ku xaliso dhibaatada ka dhex taagan iyada iyo aabaheed iyo waliba qoyskeeda.
Emma ayay isku dheceen aabaheed kaddib markii uu bilaabay inuu la haasaawo gabar aad uga yar isla markii laga soo daayay xabsi ku yiilay Mareykanka oo lagu heystay wax is daba marin iyo been abuur.
Gacalisada Bale ayaa sidoo kale la sheegayaa inay ku faraxday in dib loo dhigo arooskeeda maadaama ay dhawaan dhashay canugeedii saddexaad isla markaana ay dooneyso inay soo kabato si uu Arooskeeda u dhoco waqti ay qaab qurxoon ku jirto.
“Waxaa iminka jira Jahwareer badan oo reerka, waxay doonayaan inay waxyaabaha xasiliyaan ka hor inta aysan is guursan. Weli aad ayay isku Jecelyihiin balse waxaa u yaala arrimo badan ay tahay inay la tacaalaan.”
Waqtiga rasmiga ah ee la ciyaarayo Super Cup-ka Spain oo la shaaciyay (Afrika ayaa lagu ciyaarayaa markii ugu horaysay)
"Marka aad haysato ciyaartoy sida Martial, Rashford, Lingard, Juan Mata iyo Sanchez, waxaad sameyn kartaa xilli ciyaareed gaar ah”